Quantum Resistant Ledger စျေး - အွန်လိုင်း QRL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Quantum Resistant Ledger (QRL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Quantum Resistant Ledger (QRL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Quantum Resistant Ledger ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 396 383.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Quantum Resistant Ledger တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Quantum Resistant Ledger များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Quantum Resistant LedgerQRL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.145Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ယူရိုEUR€0.123Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.111Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.132Quantum Resistant LedgerQRL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.32Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.916Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.21Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.54Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.193Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.202Quantum Resistant LedgerQRL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.28Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.13Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.769Quantum Resistant LedgerQRL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹10.89Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.24.36Quantum Resistant LedgerQRL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.199Quantum Resistant LedgerQRL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.219Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.51Quantum Resistant LedgerQRL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.01Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥15.36Quantum Resistant LedgerQRL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩172.78Quantum Resistant LedgerQRL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦56Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽10.65Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.03
Quantum Resistant LedgerQRL သို့ BitcoinBTC0.00001 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ EthereumETH0.000371 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ LitecoinLTC0.0025 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ DigitalCashDASH0.00167 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ MoneroXMR0.00166 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ NxtNXT12.02 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ Ethereum ClassicETC0.0204 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ DogecoinDOGE41.48 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ZCashZEC0.00168 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ BitsharesBTS5.59 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ DigiByteDGB5.54 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ RippleXRP0.488 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ BitcoinDarkBTCD0.00512 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ PeerCoinPPC0.503 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ CraigsCoinCRAIG67.68 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ BitstakeXBS6.33 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ PayCoinXPY2.59 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ ProsperCoinPRC18.64 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ YbCoinYBC0.00008 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ DarkKushDANK47.63 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ GiveCoinGIVE321.72 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ KoboCoinKOBO32.79 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ DarkTokenDT0.134 Quantum Resistant LedgerQRL သို့ CETUS CoinCETI428.67